Yini ongayibona futhi uyenze e-Aix-en-Provence, eFrance | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Ukuphunyuka eYurophu, EFrance, General
Kutholakala eningizimu yeFrance, Izingubo ze-Aix-en-Provence ngokukhanya okukhethekile, enezinsuku eziningi ezinelanga nesimo sezulu esihle. Lokhu kukhanya nombala weProvence yilokho okuhehe abadwebi abanjengoCézanne, owakhuthazwa yileli dolobha elihle emisebenzini yakhe eminingi. Idolobha elihle kakhulu futhi elamukelekayo, kude nezindawo ezihehayo ngokweqile neziminyene.
I-Aix-en-Provence yindawo ekahle yokwenza thola iFrance enobungane nezothando. Idolobha elihle elinamakhona amaningi ongawathola. Indawo ekahle yokuphumula ngenkathi ujabulela isimo sezulu esihle kakhulu namathafa amahle. Thola konke ongabona futhi wenze kuleli dolobha eliseduze neMarseille.
1 Landela ezinyathelweni zomdwebi uCézanne
2 Iminyuziyamu e-Aix-en-Provence
3 ISanta-Sauveur Cathedral
4 Izikwele ezinkulu
5 Izinkambo Mirabeau
6 Ungafika kanjani ku-Aix-en-Provence
7 Uzohlala kuphi e-Aix-en-Provence
Landela ezinyathelweni zomdwebi uCézanne
Akunakwenzeka ukuvakashela i-Aix-en-Provence ngaphandle kokufuna ukubona izingosi zomlingiswa wayo odume kakhulu, i- umdwebi uCézanne. UCézanne wanikela ngemisebenzi yakhe eminingi ekuboniseni izikhala edolobheni, ngoba wayethanda lokho kukhanya kwe-Aix-en-Provence. Wazalelwa e-rue de l'Ópera futhi washona kuleyo yaseBoulegon. Enye yezindawo ezivame ukuvakashelwa yiCézanne Workshop, lapho apenda khona nsuku zonke kusuka ngonyaka we-1902 kuya kowe-1906. Indawo lapho kwenziwa khona imisebenzi okukhonjiswa ngayo namhlanje eminyuziyamu ehamba phambili emhlabeni. Indawo enhle futhi ethule engakhuthaza noma ngubani, noma kungenakwenzeka ukuthatha izithombe ngaphakathi. Siqhubeka ngeBastida del Jas de Bouffan, indawo ejwayelekile eCézanne lapho imisebenzi yakhe yokuqala yaqala khona futhi yikhaya lakhe. E-Bibemus Quarries siyabona umbala ocher ojulile owakhanga umdwebi emaphethelweni edolobha.
Ngaphezu kwezindawo lapho umdwebi uCézanne aphefumulelwa khona, e-Aix-en-Provence singathola eminye iminyuziyamu eminingi esingayivakashela. I- IGranet MuseumIsibonelo, itholakala esakhiweni esihle, esigodlweni esidala saseMalta. Akungabazeki ukuthi ingenye ebaluleke kakhulu edolobheni, ngoba iqukethe imisebenzi esukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX nababhali abanjengoCézanne noma uRembrandt. EVasarely Foundation sizothola imibukiso ehlukene unyaka wonke. Ehhotela de Gallifet sizothola indlu yobuciko endaweni yaseMazarin, esithabathabeni somuzi wekhulu le-XNUMX elinemibukiso yazo zonke izinhlobo. IPlanetárium yindawo enhle kakhulu yemindeni, njengoba inemisebenzi yabancane.
Khumbula ukuthi i-Aix-en-Provence yakhelwe kwifayela le- idolobha lasendulo roman. ISanta-Sauveur Cathedral iyisakhiwo senkolo esibaluleke kakhulu, futhi yakhiwe ngqo ethempelini lase-Apollo, phakathi kwekhulu lesi-XNUMX nelesi-XNUMX, ngakho-ke lesi sakhiwo sinezitayela ezahlukahlukene. Izitayela ezigqame kakhulu, kokubili emnyango nasengaphakathi, ziyingxube ye-Romanesque neGothic.
La IPlaza d'Albertas Ingenye yezinhle kakhulu kulo lonke idolobha. Indawo ebukeka njengekona lokuthula edolobheni elinemigwaqo emincane. Ngomthombo ophakathi nendawo, uzungezwe izigodlo ezine. Ngaphezu kwalokho, akumele sikhohlwe ukuthi leli dolobha laziwa nangokuthi yilona elinemithombo eyinkulungwane, ngakho-ke kungenzeka ukuthi cishe njalo sizothola umthombo ezigcawini esizibonayo. IPlaza de la Mairie kungenye futhi okumele uyibone. Ngomthombo wayo kanye nezinye izakhiwo okufanele zibonwe, njenge-Town Hall noma i-Clock Tower, newashi layo lezinkanyezi. NgamaSonto bafaka imakethe yezincwadi esezidayisiwe, futhi kunezindawo zokudlela ezinhle eziningana ezinamathala okuphumula.
Ukubuka le ndawo yedolobha kungenye yezinto ezithakazelisa kakhulu ongazenza. Indlela izungezwe imigoqo ethokomele nezindawo zokudlela, nangezigodlo zekhulu leshumi nesikhombisa neshumi nesishiyagalombili ezenza kube ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu ukuchitha usuku edolobheni. Futhi yisikhala esixhumanisa indawo yaseMazarin, okuyindawo entsha sha, neVille Comptale, okuyindawo endala.
Ungafika kanjani ku-Aix-en-Provence
Ukufika kule ndawo eseningizimu yeFrance kulula kakhulu, futhi sinezinye izindlela eziningi. Uma sifika ngendiza, okuvame ukuthi kube okuvame kakhulu, i- isikhumulo sezindiza esiseduze iMarseille, okuqhele ngamakhilomitha angama-25. Enye indlela esheshayo nelula ukusebenzisa isitimela esinejubane elikhulu, esiteshini saso siqhele ngamakhilomitha ayi-15. Inemigqa yamabhasi exhuma nedolobha kalula. Uma sifika ngemoto, imigwaqo yezimoto iyindlela engcono kakhulu ngenxa yokuba lula kwayo, yize ibiza kancane.
Uzohlala kuphi e-Aix-en-Provence
Uma sifuna ukwazi idolobha lase-Aix-en-Provence ngokujula, singahlala edolobheni lakudala, noma eduze ne-Cours Mirabeau, indawo ethandwayo lapho kunamahhotela amaningi nalapho ungathola khona indawo yokuhlala esezingeni elifanele kalula. Uma sifuna ukuthula okungaphezulu, singabheja emadolobheni aseduze, yize kumele sihlale sibheka izixhumanisi zezokuthutha ukubona ukuthi kufanele yini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Yini ongayibona futhi uyenze e-Aix-en-Provence, eFrance
Amathiphu wokuvakashela iMnyuziyamu yaseGhibli eJapan